ကောင်းကင်ကို: ပန်းသီးပေးတဲ့ ကောင်မလေး (by Herman Rosenblat)
Posted by Kaung Kin Ko at 7:46 PM
မစားကောင်းသော ပန်းသီး မဟုတ်တာ သေချာတယ်ဗျာ...။
ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ ကျနော်က အဲဒီလို မျှော်လင့်ချက်နဲ့ အသက်ဆက်ရတဲ့ အကြောင်းတွေကို သိပ်သဘောကျတာ။ ကျနော်ဘာသာပြန်လက်စ “ရှောရှမ့်ရီဒင့်ရှင်း” ကို ဆက်ပြီး ဘာသာပြန်ဦးမယ်။
ဆွတ်ပျံ့လွမ်းမောဖွယ်ရာ အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပဲ။ ဘာသာပြန်ထားတာလည်း ထိမိလှတယ်။
Thank you for this post. It's really good. I like it so much. This story can give the reader sth. Thanksalot.
Great short story. Your translation is great.Thanks you so much.
ရင်ထဲနက်နက်နဲနဲ ထိုးဝင်ထိရှသွားတယ်။ ခါးသက်တဲ့ဘဝတွေကနေ တဖြေးဖြေးချိုမြသွားတာကိုက ဒီဘာသာပြန်ရဲ့အနှစ်ပဲထင်တယ်။ တိုတိုလေးပေမယ့် နာနာကျင်ကျင်မျက်ရည်ရစ်ဝဲရာက ကြည်ကြည်နူးနူးပြုံးမိသွားတဲ့အထိ ညင်ညင်သာသာဆွဲခေါ်သွားတဲ့ ဘာသာပြန်အရေးအသားက ထိထိမိမိ။ မျှော်လင့်ခြင်းတွေ တကယ်ရှင်သန်လာတဲ့အခါ...ဘဝဆိုတာနေပျော်စရာပေါ့။ ပန်းသီးပေးတဲ့ကောင်မလေးမှာ လွတ်လပ်တဲ့ခြေလှမ်းတွေရှိနေဖို့တော့လိုတာပေါ့လေ။
Good translation. Great job. Good story. Keep it up. :-) Thanks
အင်မတန်ကောင်းတဲ့ မေတ္တာဇာတ်လမ်းလေးကို ဘာသာပြန်ကောင်းတော့ ရင်ထဲကို အမြဲ မှတ်မိနေအောင် ကြိုက်မိပါတယ်။ ဒါမျိုးလေးတွေ နောက်ကိုလည်း ရေးပေးပါဦးနော် ကိုကောင်းကင်ရေ။